China 20-800mm iHDPE Pipe neZilinganisi Plastic Electrofusion Welding Machine 2700W CE eziphunyeziweyo kwemveliso kunye Factory | UTSHINTSHO
20-800mm HDPE Pipe neZilinganisi Plastic Electrofusion Welding Machine 2700W CE yamkelwe
1. Imodeli: ZDRJ800
2. Uluhlu olusebenzayo: 20-800mm
3. Inkumbulo: 4000 iingxelo
4. Ukuwelda umbane: 8-48V
Pipe neZilinganisi Electrofusion
Emva kweNtengiso yeNkonzo:
Izahlulo zasimahla, ukufakelwa ebaleni, ukuKhomishini kunye noQeqesho, Ukulungiswa kweNdawo kunye neNkonzo yoLungiso, iNkxaso kwi-Intanethi, iNkxaso yeVidiyo
ZDRJ ngumatshini osetyenziselwa izinto ezininzi we-Electrofusion Machine (kumbane ombane ophantsi ongu-8V48V) onokukwazi ukufakela naluphi na uphawu lokudibanisa olufumanekayo kwimarike, ukuya kuthi ga kwi-400mm yenguqulo400 ukuya kuthi ga kwi-800mm yenguqulo.
Umatshini useta ngokuzenzekelayo iipamfusion ezichanekileyo ngokufunda kwePen Optical okanye ukwaziswa okwenziwa ngesandla kweKhowudi yeBhari ebonakalayo kwii-couplers (ngokwe-ISO13950). Kwimeko apho abahlanganisi bengabonisi ikhowudi yebar, kunokwenzeka ukuba bazise ngesandla uxinzelelo kunye nexesha lokuhlangana elinconyelwe ngumenzi.
ZDRJ Inememori yangaphakathi yokugcina iiparameter fusion (iiparameter ezisetyenzisiweyo, izinto zokudibanisa, njl njl.). Kuyenzeka ukuba uprinte idatha yeFusion kwaye uyikhuphele kwiPC.
1. Ukuhlanganiswa ngokufunda ikhowudi ye-bar / ngokwazisa ngesandla ikhowudi ye-bar / ngokwazisa ngesandla uxinzelelo kunye nexesha lokudibanisa
2. Umpu wokuskena ungasetyenziselwa ukuchonga iikhowudi zebar yeefektri ezininzi zombhobho ekhaya nakumazwe aphesheya
3. Imemori yokwakha enemijikelo ye-4000 ye-welding, idatha inokukhuphela kwi-laptop nge-usb okanye ngokuprinta kwindawo yokusebenza
4. imbuyekezo lobushushu Automatic ngokungqinelana lobushushu bume
5. Isinxibelelanisi se-Universal 4-4.7mm, nokuba isinxibelelanisi silungile okanye akunjalo sihambelana ngqo nomgangatho we-welding, kufuneka sibuyise ngexesha
6. Uyilo olukrelekrele, xa umatshini engaphumeleli, uyakubonisa impazamo (Njengombane wombane, imveliso yangoku, ubushushu obujikelezileyo), phantsi kombane okanye ngaphezulu kwamandla ombane kunokubangela ukunyibilika okungaphantsi
Umatshini wombane we-Electrofusion
1. umzimba womatshini
3. isincamathelisi ngesandla
4. ityala lezothutho
5. 4.7 * 4.0 izihlanganisi
I-PE / PP / PPR
220VAC-50 / 60Hz
Isiphumo sangoku seMax
4.7mm / 4.0mm
* Uluhlu olusebenzayo lungahluka ngokwendlela yokulinganisa. Jonga kumenzi ofanelekileyo wamandla kunye nexesha lokuwelda elifunekayo.
* Amandla kuma-60% oMjikelo wokuSebenza.
Umgangatho wendibaniselwano uxhomekeke kule miyalelo ilandelayo elandelwe ngononophelo.
UKUPHATHWA KWEEMIBhobho & IZILUNGISO
Xa kudityaniswa, ubushushu bemibhobho kunye nokufakwa kufanele kufane nobushushu obulinganisiweyo ngesilinganisi somatshini.
Ke ngoko azinakho ukubethwa ngumoya onamandla okanye ukukhanya kwelanga ngokuthe ngqo: iqondo labo lobushushu linokwahluka ngokufanayo kubushushu obujikeleze umhlaba, okuchaphazela ukudibana okungalunganga (umbhobho kunye nokufakwa okungonelanga okanye ukuhlangana okungaphezulu). Kwimeko yobushushu obuphezulu, gcina umbhobho kunye nokufakelwa kude elangeni ngqo kwaye ulinde de ubushushu babo bufane nobushushu obufutshane.
Sika imiphetho yombhobho ngokuthe tye, usebenzisa izixhobo zokusika imibhobho ekhethekileyo. Ngononophelo zama ukuphelisa imibhobho yokugoba kunye nokufakelwa kwesilinganisi okanye iioyvalizations.
Zikhusele ngononophelo izaleko zeoksijini kwimiphetho okanye kwimiphetho yokulinganisa ngombhobho okhethekileyo. Qinisekisa ukuba ukrolaiyunifomu kwaye igqityiwe ngaphezulu komphezulu oza kufakelwa ogqitha embindini wento emalunga ne-1 cm; Ukunqongophala kolu hlobo lomsebenzi kubangela ukudibanisa okungaphezulu, kuba kuthintela ukungena kwamalungu eemolekyuli kunye nokuchaphazela iziphumo zokudibana. Iindlela zokukhuhla njengephepha lesanti, ivili leemerykufuneka ithintelwe.
Thatha i-coupler kwiipakethe zayo ezikhuselayo, ucoce ingaphakathi ngokwemiyalelo yomenzi.
Faka imiphetho yombhobho kwindawo yokudibanisa.
Kuyimfuneko ukusebenzisa ulungelelwaniso lwe:
-ukuqinisekisa ukuba iinxalenye zizinzile ngexesha lokudibanisa kunye nenqanaba lokupholisa;
-thintela naluphi na uhlobo loxinzelelo loomatshini kwilungu ngexesha lokudibanisa kunye nokupholisa;
Indawo yokudibanisa kufuneka ikhuselwe kwiimeko zemozulu eziqinileyo, ezinje ngokufuma, amaqondo obushushu asezantsi -10 ° C okanye ngaphezulu kwama-40 ° C, umoya onamandla, ilanga ngqo.
Imibhobho & izixhobo ezisetyenzisiweyo kufuneka zibe zezinto ezifanayo okanye izinto ezifanelekileyo. Ukuhambelana phakathi kwezinto kufuneka kuqinisekiswe ngokwenziwa.
Ixesha lokupholisa lixhomekeke kububanzi be-coupler kunye nobushushu obuhleliyo. Kubalulekile ukulandela amaxesha anikezwe ngumenzi wezinto ezihlanganisiweyo ezisetyenzisiweyo.
Ukuthintela uxinzelelo loomatshini ngokudibeneyo (ukugoba, ukuhambisa, ukujija) ukunqamla iintambo kunye nokulungelelanisa kuphela xa ukudibana kupholile kwaphela.
Ngaphambi kwenkqubo yokuhlangana kufuneka uthathe isigqibo sokuba uyafuna na ukufundwa kwekhowudi yomatshini
Inkqubo yombhobho / izixhobo ukuze kube nokulandelwa okupheleleyo kokuhlanganiswa okugqityiweyo. Idatha yeFusion iya kuba
igcinwe kwimemori yomatshini kwaye inokuprintwa okanye ikhutshelwe.
Skrolela kwimenyu ephambili de ufike
Cinezela NGENA ukufikelela kwinqanaba elilandelayo.
Khetha "Ukulandeleka”Usebenzisa izitshixo C (ÙÚ).
Cofa amaqhosha C (× Ø) ukwenza okanye ukungasebenzi ngokulandelelana.
Cinezela NGENA ukugcina useto kwaye ubuyele kwimenyu.
Cinezela YEKA ukubuyela kwimenyu ephambili.
Egqithileyo Umbhobho we-PEX kunye neZilinganisi zaManzi aSelwayo ngoGreen / Mhlophe / Luhlaza / Luhlaza
Okulandelayo: Umbhobho we-Pipe extrusion Line i-Pe ePlastiki eshushu ye-Welding Gun ye-Plastic Fabrication
315 umbhobho Electrical Welding Machine, iHDPE Pipe ...
160 eziphathekayo Elektra Hdpe Pipe Electrofusion We ...
315 Electrofusion Welding Machine, iHDPE PP PP ...
I-HDPE yePlastiki yePayipi yokuThengisa i-Electrofusion Weldin ...
400/630 Welding Electricfusion Matshini Kuba Gas ...
Ubungakanani Kwi-32mm To 315mm Electric Fusion Welder Fo ...